ओढार भित्र बस्ने माताको यसरि रक्षा गर्छ बाघ र बादरले, भित्र पस्दा सबै चकित, गुफाभित्र डरलाग्दो शक्तीको बास, किन अचानक रिसाइन माता ? – सुदूरखबर डटकम
ओढार भित्र बस्ने माताको यसरि रक्षा गर्छ बाघ र बादरले, भित्र पस्दा सबै चकित, गुफाभित्र डरलाग्दो शक्तीको बास, किन अचानक रिसाइन माता ?
स्यांग्जा | नेपालमा विभिन्न घटना घट्ने क्रम चलिरहेको छ। बिशेश गरेर आजकल समजमा भएका धेरै घटनाले मिडियामा राम्रो स्थान पाउने गरेका छन। युटुब पत्रकारहरु अहिले गाउँ गाउँ डुलेर समाजको भित्री पाटो लाई बाहिर लेराउन सहयोगि भुमिका खेलेका छन। त्यस्तै देशमा भएका घटना परि घटनाको बिषयमा बोल्दै अनेक मानिसहरु मिडियामा हाईलाईट भएका छ। त्यस्तै कतिपय ठाँउमा माता र देवि भनेर पनि प्रचार हुने गरेको छ
हिजो आज पाल्पामा त्यस्तै एक महिला काली गण्डकी नदिको किनारमा ओडार भित्र तपस्या गरेर माता बनेको भन्ने न्युज भिडियोहरु आएका थिए। उनको यस्तो कामको पछाडी के राज छ र के कारणले उनी ध्यान र तपस्यामा छिन भन्ने बिषय सबैको लागि कौतुहलताको बिषय बनेको छ। हेर्नुहोस यो भिडियो – ओढार भित्र बस्ने माताको यसरि रक्षा गर्छ बाघ र बादरले, भित्र पस्दा सबै चकित, गुफाभित्र डरलाग्दो शक्तीको बास, किन अचानक रिसाइन माता ?